Ambongadiny 25 38 50 76 mm Mpanamboatra fonosana tilikambo plastika Ring Pall | Zhongtai
Ny fonosana plastika Pall Ring dia savaivony lavaka mitovy amin'ny peratra famonosana, ny varavarankely tsirairay dia misy ravina lela dimy, ny lelan'ny lela ravina tsirairay dia manondro fo, ambaratonga ambony sy ambany amin'ny toerana misy ny varavarankely mifanohitra amin'ny fotoana samy hafa sy amin'ny ankapobeny. Faritra afovoan'ny fidirana amin'ny rindrina manodidina ny 30% eo ho eo. Miaraka amin'ny porosity, ary ny fihenan'ny tsindry ary ny haavon'ny hazavana famindrana faobe, ny vodin-drano avo lenta, ny fifandraisan'ny etona miaraka amin'ny feno, ny haben'ny fahombiazan'ny famindrana faobe.
Io firafitra io dia manatsara ny fizarana ranona-etona, ampiasao tsara ny atin'ny peratra, mba hamenoan'ny tilikambo ny gazy sy endrika ranoka avy amin'ilay lalana malalaka.
Famaritana ara-teknika ny peratra plastika
PP / RPP / PVC / CPVC / PVDF / PTFE, sns
> 3 taona
Toerana ambonin'ny m2 / m3
Fonosana isa / m3
Fonosana fonosana Kg / m3
Antony fanangonana maina m-1
Famaritana avo lenta, fihenan'ny tsindry ambany, haavon'ny haavon'ny famindrana faobe, teboka tondra-drano avo, fifandraisan-tsolika misy gazy, hery misintona kely, fahombiazan'ny famindrana betsaka.
1. Ny rafitra manokana ataon'izy ireo dia mahatonga azy io hanana flux lehibe, fihenan'ny tsindry ambany, fahaiza-manao fanoherana tsara.
2. Fanoherana mahery vaika ny fahasimban'ny simika, habaka banga lehibe. fitsitsiana angovo, vidin'ny fandidiana ambany ary mora entina sy mampidina entana.
Ireo fonosana tilikambo plastika isan-karazany ireo dia be mpampiasa amin'ny solika sy ny simika, ny klôroza alkaly, ny etona ary ny fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny max. mari-pana ny 280 °.
Toetra ara-batana sy simika an'ny peratra plastika
Ny fonosana tilikambo plastika dia azo alaina avy amin'ny plastika mahatohitra hafanana sy manimba harafesina, ao anatin'izany ny polyethylene (PE), polypropylene (PP), polypropylene (RPP), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl chloride (CPVC), polyvinyiidene fluoride (PVDF) ary Polytetrafluoroethylene (PTFE). Ny mari-pana amin'ny haino aman-jery dia manomboka amin'ny 60 Degre C ka hatramin'ny 280 Degree C.
Performace / Material
Density (g / cm3) (aorian'ny famolavolana tsindrona)
Operation temp. (℃)
Fanoherana ny harafesina simika
Tanjaka famatrarana (Mpa)
Ny Factory anay dia manome toky fa ny fonosana tilikambo rehetra vita amin'ny 100% Virjiny.
Fandefasana ho an'ny vokatra
1. Fandefasana ranomasina ho an'ny habetsahana.
2. AIR na EXPRESS TRANSPORT ho an'ny fangatahana santionany.
Ao anatin'ny 3-10 andro
Fenitra nasionaly sinoa; SGS; Manolora fiantohana kalitao amin'ny fangatahana.
Teo aloha: Kitapo plastika Super Intalox Saddle Ring Packing
Manaraka: Fonosan'ny Tower PTFE Pall Ring
Fonosana Scrubber Q-pack plastika
Kitapo plastika Rachig Ring Tower
Fonosana simika vita amin'ny plastika VSP
Famonosana Tower Beta Ring Plastika
Tower fonosana PP, PE, PVC, CPVC, PVDF plastika C ...
Baolina mitsingevana plastika ho an'ny fitsaboana maloto